Borda amin'ny solosaina ho an'ny ORINASA → Ambongadiny • Mpanamboatra • Mpizara P&M
Tolotra ho an'ny orinasa
Nahoana no ilaina ny miara-miasa amintsika?
Izahay dia orinasa miasa manokana amin'ny varotra sy ny fitsinjarana ny doka sy ny akanjo miasa. Izahay dia manolotra fanamarihana fa tsy ny akanjo ihany, fa ny lamba ihany koa mampiasa ny fomba amboradain'ny solosaina ary ny fanontana efijery.
Soraty ny orinasanao anio ary mahazoa fihenam-bidy mahaliana! >>
Ny mpiasa mahay izay manana traikefa an-taonany maro dia ho faly manampy sy torohevitra amin'ny famolavolana sy ny fifidianana ny teknika tsara indrindra. Manana traikefa be dia be amin'ny fanjaitra, fanapahana ary famolavolana ireo masoivoho dokambarotra sy marika malaza isika.
Hatramin'ny taona 2003 dia nanolotra serivisitra fanjairana, fanapahana vy, fanoratana vy ary fanaovana marika isika. Manana ny efitranon'ny fanjairana sy ny masinina fanaovan-tsika izahay. Manana ambaratonga maro izahay - vokatra 6000 XNUMX mahery, fitafiana miasa ary akanjo fanaovana dokam-barotra avy amina mpanamboatra ekena amin'ny vidiny tena manintona. Azonao atao ny mividy ny serivisy fanamiana akanjo sy labelingra (azafady mifandraisa aminay mialoha raha hanonona teny manokana) amin'ny tranokalanay www.pm.com.pl na ato amin'ny magazay misy antsika ao Allegro "Mpamokatra-BHP".
Ny efitrano fanjaitra ataonay dia manome antoka fa ny vokatra vokarintsika dia vita amin'ny lamba faran'izay ambony indrindra sy ny haitao ilaina indrindra ary ny teknolojia fandokoana sy famaranana mandroso indrindra. Azontsika atao ny mihaona amin'ireo mpifaninana mitaky fangatahana indrindra amin'ny alàlan'ny fampiasana mahomby ny fitaovana arahinay.
Malemy paika isika - mihetsika haingana amin'ny filan'ny mpanjifa - na amin'ny resaka famokarana izany na amin'ny raharaha ara-dalàna. Manolotra ny serivisy fanaovana amboradara sy fanaovana pirinty izahay na amin'ny vokatra novidina tao amin'ny magazinay ary natolotry ny mpanjifa. Ho fanampin'izany, amin'ny fisoratana anarana amin'ny tranokalanay, rehefa mividy, dia afaka mahazo fihenam-bidy fanampiny amin'ny kaomandy faharoa.
Tonga isaky ny andiany tsirairay isika, manara-maso ny fampiharana azy isaky ny dingana. Isika dia manorina ny fitokisanay amin'ny fifandraisana misokatra amin'ny mpanjifa sy ny fikarakarana maharitra.
Borda amin'ny solosaina - fananganana olona malaza
Ny famokarana karazana akanjo isan-karazany - ao anatin'izany ny akanjo manokana - dia ampahany amin'ny tolotra ataontsika. Amin'ny maha-fiaraha-miasa, ny mpanjifantsika ihany koa dia afaka mahita serivisy fanampiny maro. Isika koa dia miasa toy ny atrikasa amboradara, izay iray amin'ireo antony lehibe tokony hireharehantsika.
Fanatanana ny solosaina dia kalitao tsara tarehy, kanto ary matevina mba hametrahana marika akanjo. Mampiasa fitaovana ara-teknika manam-pahaizana manokana, dia afaka manao, na dia ny modely voafaritra tsara amin'ny lafiny rehetra amin'ny fitafiana na firy aza. Izahay dia manao fampiharana aprily amin'ny ankamaroan'ny karazan'akanjo (lobaka polo, lobaka T-shirt, akanjo vita, aprons, tady, scarves). Tsy voafetra amin'ny karazana akanjo ihany koa isika - ny tranobainay dia manana efitrano fanjaitra sy fananganana matihanina, ka manana fifehezana tanteraka ny kalitao ny zavatra nomaninay ho anao ianao. Ny mety atolotry ny fivarotana écronida amin'ny solosaina dia tombony lehibe ho an'ny orinasa iray manompo ny tsenan'ny polka sy akanjo fanaovana dokambarotra.
Natoky anay izy ireo, ankoatry ny hafa:
sy ny maro hafa. Bebe kokoa ny hahita antsika fivarotana. Ireo tetik'asa teo aloha dia mampiseho fa na inona na inona tetikasa, afaka manatanteraka baiko azo antoka sy ara-potoana.
Fanontam-pirinty - marika fanaovana dokam-barotra
Iray amin'ny endrika fanamarihana matetika indrindra izay azontsika atolotra. Ity serivisy ity dia tsy vitan'ny maharitra fotsiny ary manome kalitao tsara indrindra, fa manome taratra tsara ny palette miloko amin'ny famolavolana kisary tsirairay. Noho ny teknolojia avo lenta sy ny fahalalany, dia afaka manome ny mpanjifanay ny kalitao tena tsara indrindra isika, raha ny akanjo ihany koa, ary koa ny fehin-kintana voaravaka azy ireo, soratra vita amin'ny soratra na sary. Noho ny fanamafisan'ny serivisy ataonay, dia mifehy ny fizotry ny famoronana tetikasa vita izahay.
Ny fandefasana haingana dia ny tanjonay
Manome baiko ho an'ny mpanjifa manerana an'i Polonina izahay, ary koa any ivelany. Izahay dia mandefa ny entana amin'ny alàlan'ny mpiambina DPD. Ho an'ny baiko lehibe kokoa, amin'ny fangatahan'ny mpanjifa dia ametrahantsika ny fitaterana mankany amin'ny trano fanatobiana entana. Izahay dia afaka miara-miasa amin'ny baiko mahazatra amin'ny vidiny tena manintona. Mety misy koa ny fanangonana manokana ao amin'ny foibenay ao Rawa Mazowiecka.